Bogga ugu weyn Luqadaha Barnaamijyada ugu Mushaharka Badan 15 Sanadka 2021
BASIC (luqadda barnaamijka) waa luuqad heer sare ah oo u saamaxaysa barnaamij-hayaha inuu helo xog iyo falal aad u badan oo aan la isku koobin halkii uu si toos ah uga soo gudbin lahaa xog cayriin.
In kasta oo barnaamijyada BASIC laga yaabo inay ka waxtar yar yihiin luuqadaha heerka hoose, haddana waxay xoogga saareysaa astaamaha, oo aad ugu faa'iido badan kuwa bilowga ah.
Maqaalkan, waxaan ku arki doonnaa Qaar ka mid ah Luqadaha Barnaamijyada Lacag-bixinta ugu sarreeya ee aad baran karto sannadkan.
Maxaad U Baahan Tahay Inaad Barato Luqadda Barnaamijyada
Aqoonta luuqadaha kombiyuutarku waxay hagaajisaa fikirka xisaabta iyo caqliga leh waxaana si dhakhso leh loo baran karaa si la yaab leh. Xirfadahaan sababaynta ayaa kaa caawin doona dhinacyada noloshaada oo dhan, sida go'aan qaadashada iyo xallinta dhibaatooyinka adag.
Iyada oo in ka badan 4 bilyan oo isticmaaleyaal ah ay ku jiraan internetka, codsiga koodh -siinta kombiyuutarka ayaa ka muhiimsan sidii hore. Goobta sayniska kombiyuutarka ayaa soo jiidata qaar ka mid ah maskaxda ugu kartida badan adduunka.
Ardayda ka qalin jabisa barnaamijyada ama koorsooyinka sayniska kombiyuutarka waxay sugaan fursado shaqo oo gaar ah oo abaalmarin leh oo dhinacyo kala duwan ah sida bay'ada, Daawada, ciyaaraha, Hawlaha ganacsiga, iyo Maaliyadda.
Barnaamijyadu waa luqad caalami ah oo koodhadh kombiyuutarro kala duwan laga hirgeliyo adduunka oo dhan oo leh codsiyo iyo meherado badan. Raadi fursado aad xiisaynayso meel ka baxsan dalkaaga hooyo. Hal semester ama sanad dibedda ah ayaa ku siinaya aragti gaar ah oo ku saabsan adeegsiga teknolojiyadda caalamiga ah, fursadda aad ku baran karto dhaqammo kala duwan oo aad ku baran karto luqado cusub.
Baahida loo qabo xirfadaha barnaamijka kombiyuutarka ayaa sii kordhaya. Qalinjabiyeyaasha qaybta IT -ga waxay kasbadaan, celcelis ahaan, mushahar bilaw ah oo hufan. Koorsooyinka sayniska kombiyuutarku waxay kasbadaan 71% mushahar bilow ah oo ka sarreeya koorsooyinka cilmiga bulshada iyo aadanaha.
Intee in le'eg ayay barnaamij -sameeyeyaashu sameeyaan?
Sida dhagaxa dhagaxa iyo kubbadda kolayga ama xirfad kasta oo kale, sida ugu fiican ee koodhku waxaad u muuqataa inaad mushahar fiican ka hesho koodh -siinta, illaa hadda, habka ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karaa waa inaad saacado dheer ku shaqayso.
Arrinta kale ee saamaysa mushaharka barnaamijka kombiyuutarka ayaa ah tirada luuqadaha barnaamijka ee uu yaqaan.
Mushaharka celceliska ee leh wax ka yar hal sano oo waayo -aragnimo ah ee Mareykanka wuxuu ka badan yahay $ 50,000 / sanadkii. Maaha hanti, laakiin waxay si fiican u barbar dhigtaa inta badan barnaamijyada heerka-gelitaanka kale. Way adag tahay in la sheego waxa soo -saareyaasha khibradda leh ay sameeyaan maadaama ay aad u kala duwanaan karto, iyadoo dadku ay horumarinayaan qaab -dhismeedyada sida Ruby on Rails oo sameeya malaayiin doollar.
Wali, celcelis ahaan, soo-saare “xirfad-dambe” oo leh waayo-aragnimo sannado ah ayaa ku xisaabtami kara inuu kasbado $ 85,000-in ka badan oo ku filan inuu si raaxo leh ugu noolaado.
Ereyga “programmer computer” wuxuu tixraaci karaa xirfado badan oo kala duwan, takhasuska qofkana wuxuu saameeyaa mushaharkiisa. Sayniska xogtu lama mid aha barnaamijyada. Wali, labaduba si aad ah ayay isugu soo urureen: celceliska mushaharka aqoonyahanka heerka-gelitaanka waa $ 85,000, taas oo ah celceliska horumariyaha mustaqbalka. Injineerka barashada mashiinka oo hadda bilaabaya wuxuu filan karaa inuu aruuriyo qiyaastii $ 90,000.
Injineerada amniga internetka ayaa u muuqda inay sameeyaan qiyaastii ($ 95,000) halka injineerada shabakadu ay sameeyaan ($ 72,000). Soo -saareyaasha webka waxay kasbadaan qiyaastii $ 60,000.
Waa kuma barnaamij-qaadaha ugu mushaharka badan?
Barnaamijka ugu mushaharka badan adduunka maanta waa Elon Musk. Elon Musk wuxuu soo saaray Zip2, hagaha magaalada ee khadka tooska ah, 1995, kaas oo isku dayay inuu beddelo Boggaga Jaallaha ah. Wuxuu ka hirgaliyay Java.
Wuxuu iibiyay Zip2 sanadkii 1999 $ 30,722 milyan dhankiisa. 1999, X.com waxaa aasaasay Elon oo ah nidaam bangiyeed oo toos ah. waxayna gelisay 105 bilyan oo doolar waxayna ka heshay $ 165 milyan. Wuxuu u adeegsaday macaashka maaliyadeed inuu ku maalgeliyo danahiisa farsamada sida Tesla iyo SpaceX.
Luqadaha Barnaamijka ugu Baahan
Shanta luqadood ee ugu baahida badan barnaamijka 2021 waa:
Python waa luuqad guud oo ujeeddo leh oo awood u siisa kuwa wax dhisa inay adeegsadaan qaabab badan oo barnaamijyo gaar ah (tusaale ahaan, wax-qabad, ujeedo u janjeedha, milicsiga, iwm) inta ay sii kordhayaan barnaamijyada. Dhowr qalab iyo qaab -dhismeedyo caan ah ayaa lagu hormariyay Python, oo ka kooban YouTube, Raadinta Google, iyo mashiinnada iRobot.
HTML micnaheedu waa Luqadda Calaamadeynta HyperText. HTML waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fudud ee laga heli karo adduunka barnaamijyada. Farsamo ahaan marka la hadlayo, HTML waa luqad calaamadeyn ah, taas oo macnaheedu yahay inay mas'uul ka tahay qaabaynta sida macluumaadka loogu soo bandhigo degel. Ma laha waxqabad la mid ah luqadaha barnaamijyada kale ee liiskan ku jira waxayna ku kooban tahay abuurista iyo abaabulka qoraalka goob.
Baahida sare ee barnaamijyada Scala ayaa noqotay mid ka mid ah isbeddellada luqadda ee barnaamijyada ugu caansan iyadoo horumariyayaashu adeegsadaan luqadaha barnaamijka sida Scala, Perl, iyo Go ay kasbadaan mushaharka ugu sarreeya adduunka.
Barnaamij -yaqaanadu waxay u adeegsan karaan luqadda barnaamijka Scala dhowr ujeeddo. Waxay ku habboon tahay noocyada kala duwan ee mashaariicda horumarinta softiweerka ee ganacsiga gaarka ah. Waxay yihiin xog weyn iyo codsiyo la qaybiyey. Maxay yihiin shabakadaha ugu caansan ee lagu sameeyay Scala? Kuwani waa Twitter, Linked In, Tumblr iyo Shirkado.
Ugu dambayn, kama tagi karno luuqadda barnaamijka Ruby oo aan lala socon. Ruby waa shirkad horumarisa softiweerka oo ku takhasustay Ruby iyo Ruby on Rails, marka waxaan leenahay wax aan ka sheegno farsamadaas. Ruby waxaa si weyn loogu isticmaalaa horumarinta suuqa caadooyinka. Tusaalooyinka waaweyn ee suuqyada lagu dhisay Ruby waxaa ka mid ah Airbnb, Fiverr, iyo Couchsurfing.
Luqadaha barnaamijka ugu mushaharka badan
Casharkan, waxaan ku eegi doonnaa Luqadaha Barnaamijyada Lacag -bixinta ugu sarreeya. Fadlan, si taxaddar leh u raac.
Luqadda Scala waa mid aad u kooban oo aad loo miisaami karo. Scala way u sahlan tahay inay bartaan barnaamijyada wax-u-jiheeyaha.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka Scala ayaa ah in aan la beddeli karin; taasi waa, waxay ka fogaataa waxyeellooyinka waxayna awood u siisaa isbarbar -dhigga. Xog weyn iyo barashada mashiinka ayaa ah kiisaska isticmaalka luqadda barnaamijkan.
Celceliska mushaarka: $ 150,000
Luqadda barnaamijka Go ayaa waxaa soo saaray Google waxaana la soo bandhigay bishii Nofembar 2009. Iyada oo ah madal il furan, waxaa si firfircoon loogu adeegsadaa mashaariicda shirkadda dhexdeeda iyo dhowr adeeg oo heer caalami ah oo la aqoonsan yahay (SoundCloud, Netflix, Dropbox).
Sanadihii la soo dhaafay, Go ayaa si weyn u koray iyada oo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinkeeda hawlo badan oo isku-darka ah sida ka-shaqaynta isbarbar-dhigga hufan, waqtiga bilowga degdegga ah, iyo adeegsiga xusuusta kaliya marka loo baahdo mustaqbalka.
Celceliska mushaarka: $ 140,000
Rust waxaa loo abuuray mashruuc dhinac ah shaqaale shirkad tiknoolajiyadeed waxaana la sii daayay 2010. Luqaddu waxay u dhigantaa C iyo C ++ waxayna ka kooban tahay amarro badan oo isku mid ah iyo ereyo muhiim ah oo ka socda labada luqadood iyo qaar ka mid ah walxaha gaarka ah oo keliya Rust.
Luqadaha barnaamijyada ugu kobaca badan, sida laga soo xigtay GitHub. Waxaa xoogga la saaray amniga iyo waxqabadka, laba ka mid ah astaamaha Rust waa ka hortagga qaladka iyo kaydinta hufan. Luqaddu waxay ku socon kartaa aaladaha qalabka iyo adeegyada shabakadda.
Celceliska mushaarka: $ 130,000
Sanadkii 2014kii, Apple ayaa soo saartay luuqadda barnaamijkan tan iyo markaasna waxay noqotay mid ka mid ah afafka barnaamijyada sida ugu dhaqsaha badan u koraya. Swift waxay fududeyneysaa in lagu dhiso barnaamijyada macruufka aaladaha mobilada iyo desktop -ka, waxayna sidoo kale aad ugu sii badaneysaa barnaamijyada AI.
Mushaharka US $ 58,000 adduunka oo dhan iyo $ 125,000 US ee Uber, Airbnb, Square, app meditation Calm, iyo ku dhawaad ​​500,000 barnaamijyo kale oo ku jira App Store ayaa ugu yaraan qayb ahaan lagu qoray Swift.
Celceliska mushaarka: $ 125,000
C waa mid ka mid ah luuqadaha barnaamijka asaasiga ah ee ugu da'da weyn, ilaa maantadan la joogo, mid ka mid ah kuwa ugu caansan, waxaa soo saaray saynisyahan kombuyuutar Mareykan ah Dennis Ritchie.
Soosaarayaasha C waxay kasbadaan celcelis ahaan mushahar dhan $ 125,000 gudaha Mareykanka IYO $ 50,000 adduunka oo dhan. C waxaa loo soo saaray luqad ujeeddo guud ah oo loogu talagalay barnaamijyo kala duwan oo ah nidaamyada kombiyuutarka iyo qalabka.
Haskell waxay markii ugu horreysay soo muuqatay 1990. Guddi ayaa abuuray luuqaddan si meesha looga saaro caqabadaha kuwii ka horreeyay, sida ML, Hope, iyo Miranda.
Barnaamij -bixiyayaashu waxay Haskell u adeegsadaan inay baaraan oo baraan koodh -ka -shaqaynta. Astaamaha ugu muhiimsan ee luuqaddan waxaa ka mid ah xilliyo horumar gaaban, isku -halayn sare, iyo horumariyayaashu waxay sannad walba qabtaan ACM Haskell Symposium si ay u ururiyaan una wadaagaan fikradaha ku saabsan luqadda.
Celceliska mushaarka: $ 121,000
Celceliska mushaarka: $ 120,000
Waxaa lagu dhex daray codsiyo ganacsi oo dhaxalgal ah oo kasbasho leh iyada oo la wareegista Google ee Android, Java waxay ku dhacdaa No. 7 celceliska mushaharka.
Java waxaa markii hore soo saaray Oracle waana mid aad loo jecel yahay maxaa yeelay waxay dhisi kartaa miisaska, webka, codsiyada mobilada, iyo inbadan. Si xasaasi ah oo deggan oo dhakhso leh, waa heer sare oo heer ganacsi ah.
Celceliska mushaarka: $ 104,000
C ++, oo mar ahaan jiray luuqad barnaamij heer sare ah oo hadda loo adeegsado cayaaraha iyo codsiyada waxqabadka sare leh, ayaa darajooyinka C ++ 5aad ku jira celcelis ahaan mushaharka iyo kaalinta 5aad ee shaqooyinka bannaan. Luqadda caadiga ah ee waxtarka leh C ++ waxaa loo sameeyay dalabka iyo barnaamijyada nidaamka.
Horumarintiisa, waxaa inta badan loo adeegsan jiray garaafyada horumarsan, ciyaaraha, iyo codsiyada xafiiska. C ++ waa mid aad u dhakhso badan oo deggan laakiin ku adag in wax laga barto luuqadaha kale ee liiskan ku jira (marka laga reebo suurtogalnimada C).
Mushaharka celceliska: $ 102,000
Kotlin waa luqad caalami ah, joogto ah, luqad barnaamij-iskudub-dhexaad ah oo ay soo saartay shirkadda IT “JetBrains.” Waxaa loogu talagalay inuu dhexgalo Java. In kasta oo nooca JVM ee maktabadda caadiga ah ee Kotlin uu ku tiirsan yahay maktabadda fasalka Java, nooca soo -galinta nooca ayaa ka dhigaysa syntax aad u kooban.
Sannadkii 2019, Google ayaa Kotlin ka dhigtay luuqadda ay doorbidaan kuwa horumariya barnaamijyada Android, caankeedii iyo dalabkeedii ayaa cirka isku shareeray tan iyo markaas. Marka laga reebo qaab-dhismeedkiisa aadanaha oo la aqbali karo iyo iswaafajinta Java oo buuxda, Kotlin wuxuu hadda si buuxda u taageeraa bulshada weligeed sii kordheysa ee Google.
Celceliska mushaarka: $ 100,000
Perl, markeeda, waa luuqad barnaamij oo aad u firfircoon, si guudna loo turjumay oo uu sameeyay Larry Wall sannadkii 1987. Luqaddan waxaa loo abuuray luuqadda qoraalka Unix si loo sameeyo habaynta warbixinta iyo tafatirka qoraalka oo la maareyn karo.
Shaqooyin kale duwan oo kala duwan sida horumarinta webka, maamulka nidaamka, horumarinta GUI, iyo barnaamijyada shabakadda si loo xuso dhowr.
Celceliska mushaarka: $ 94,000
Ruby on Rails waa codsi shabakad server ah oo ku qoran Ruby. Waa qaabka Model-View-Controller (MVC) oo ka kooban dhismayaal caadi ah oo loogu talagalay keydka xogta, adeegga webka, iyo bogagga shabakadda.
Tan iyo markii la aasaasay 2005, Ruby waxay saamayn weyn ku yeelatay horumarinta codsiyada shabakadda iyada oo ay ugu mahadcelinayaan guryaheeda gaarka ah oo ah keydka ugu fiican.
Jadwalada iyo aragtida isbarbar-dhiggu waxay awood u siinayaan horumarinta codsi deg-deg ah oo ay weheliyaan mabaadi'da horumarineed ee waxtarka leh sida Heshiiska Isku-dubaridka (CoC) iyo Aan Ku-celcelin (DRY). Taageerada bulsho weyn oo horumarisa ayaa Ruby on Rails ka dhigaysa luqad barnaamij cajiib ah oo loogu talagalay horumarinta webka.
Celceliska mushaarka: $ 92,000
Ujeeddo-C waa qayb ka mid ah luuqadda barnaamijka C waxayna bixisaa awoodaha u jihaysan shayga iyo wakhti-hawleed firfircoon. Waxay ka dhaxlaysaa odhaahda iyo caddaynta xakamaynta socodka C waxayna ku darsataa syntax si loo qeexo fasallada iyo hababka.
Ujeeddo-C waxay isku dari kartaa C iyo C ++ nambarka koodhka ee luqadda C, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon horumarinta codsiga. Waxay ku saleysan tahay fikradda koodh oo matala walxaha dabiiciga ah.
Celceliska mushaarka: $ 66,000
Pascal waa luuqad barnaamijka kombiyuutarka loo sameeyay si loo baro barnaamish ahaan anshax nidaamsan iyo horumarinta barnaamijyo la isku halleyn karo oo hufan. Waa luuqad ku salaysan Algol waxaana ku jira dhismayaal kala duwan oo Algol ah.
Pascal wuxuu bixiyaa noocyo badan oo xog iyo qaab -dhismeedyo barnaamijyo ah oo u sahlaya in la fahmo lana joogteeyo barnaamijyada Pascal.
Celceliska mushaarka: $ 62,000
Markaan ka hadalno luqadaha barnaamijyada ugu wanaagsan adduunka, Python had iyo jeer waxay ka tagtaa sumcaddeeda. Python waa luuqad barnaamij wax -ku -ool ah oo wax -ku -ool ah oo laga isticmaalo dhinacyo kala duwan.
Python kuma koobna horumarka kaliya laakiin waxaa si weyn loogu adeegsadaa horumarinta webka, sayniska xogta, barashada mashiinka, xisaabinta xisaabta, iwm.
Meelaha gaarka ah sida Reddit iyo YouTube waxay ku saleysan yihiin Python, sidaa darteed waxaa jira baahi aad u sareysa oo loogu talagalay soosaarayaasha Python maanta.
Mushaharka celceliska: $ 56,000
Ka dib markaad akhrido sida ay luuqadaha barnaamijyadan faa'iido u leeyihiin, waa inaad xiiso u qabtaa inaad ogaato meesha aad ka baran karto afafkaas. Warka fiicani waa inaad ka baran kartaa dhammaan luqadaha ku jira liiska iyo kuwo kale oo badan machad kasta oo sumcad leh. Kaliya ka raadi internetka oo arag machadyo badan.
Ma aha oo kaliya luuqadahaan inay yihiin kuwo lacag badan laakiin sidoo kale waa kuwo aad loogu baahan yahay. Luqadahaani waa ikhtiyaarro aad u fiican si aad shaqadaada meel fog uga hesho.
Waxaa laga yaabaa inay kugu adagtahay inaad gasho sawirada saamiyada bilaashka ah ee isticmaalkaaga gaarka ah ama ganacsigaaga, maaha inaad...
Sida loo codsado SSI | Tillaabo-Tallaabo Tusaha
SSI waxa ay ka faa'iidaysteen in ka badan 10 milyan oo qof oo naafo ah, indhoolayaal, ama waayeel ah oo dakhligoodu xaddidan yahay iyo hantidooda muddo 45 sano ah, laakiin…
Sida Loo tirtiro Taariikhda Dalbashada ee Amazon sanadka 2022 | Tilmaan Fudud
Muddo dheer, Amazon waxay ahayd mid ka mid ah aaladaha iibinta buugaagta ee ugu wanaagsan, laakiin waad iibsan kartaa…
Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta Wisconsin 2021